Olee otú iji weghachi iPad si iPhone ndabere
> Resource> iPhone> Olee otú iji weghachi iPad si iPhone ndabere
Enwere m ike weghachi a New iPad site na iPhone ndabere?
M zụtara a ọhụrụ iPad ma na-achọ iji weghachi m iPhone ndabere ka ya, gụnyere photos, kọntaktị, videos na ndetu. Olee otú m ga-esi ya? Biko, nyere, ekele!
iTunes bụ ezigbo onye na-enyere jikwaa gị iPhone ọdịnaya. Ya site ndabere oge ọ bụla mgbe ị na mmekọrịta gị na iPhone. N'ihi ya, ọ bụ nnọọ mfe n'ihi na ị iji weghachi gị aga na ọdịnaya. Otú ọ dị, ihe ọjọọ-ekwu bụ na iTunes ndabere naanị-enye gị ohere iji weghachi dum ọdịnaya, na ẹdude ọdịnaya na gị iDevice ga-ihichapu mgbe weghachi. Ọ bụrụ na ị chọrọ selectively weghachi iPhone ndabere gị iPad, bụ n'ebe ọ bụla n'ụzọ?
N'aka. Na a-atọ ndị ọzọ na-eweghachiri ngwá ọrụ, ị nwere ike iweghachi iPad na iPhone ndabere ala. Ihe dị gị mkpa bụ: Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows) na kọmputa ebe gị iPhone ndabere na-emi odude.
Download free ikpe mbipute a omume n'okpuru na wụnye ya na kọmputa gị. Ọzọ, ka ego ngwọta nzọụkwụ site nzọụkwụ ọnụ.
Nzọụkwụ 1. Họrọ iPhone ndabere ka ike iṅomi
Mgbe wụnye na-agba ọsọ usoro ihe omume na kọmputa gị, ị ga-enweta bụ isi window dị ka ndị na-ahụ gị iPhone ndabere faịlụ aka.
Gị niile iDevices 'ndabere ga-hụrụ na egosipụta ka a ndepụta. Họrọ otu maka gị iPhone na ị na-aga iji weghachi gị iPad na pịa "Malite iṅomi" iji na-enweta ihe ọmụma zuru ezu ọdịnaya.
Nzọụkwụ 2. Weghachi iPhone ọdịnaya gị iPad
Mgbe iṅomi okokụre, ndị niile ọdịnaya nke ndabere na-amịpụtara na nkọwa. Ịnwere ike ihuchalu ha niile otu otu. Akara ndị na ị chọrọ ka gị iPad na "Naghachi" ha na otu click, na-azọpụta ha na gị na Mac.
Ugbu a, ị nwere ike iweghachi iPhone ndabere gị iPad site na iji iTunes. Dị ka kọntaktị, ị pụrụ itinye ya ndị Apple Mail mbụ, mgbe ahụ mbubata gị iTunes, na site na iTunes, ị pụrụ ịkpali gị iPad mfe.
iPhone zuru: Olee naghachi Data si Lost / zuru iPhone